ကနေဒါမှအမေများနေ့ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
El ကနေဒါမှအမေနေ့ ၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးချစ်မြတ်နိုးရသောအားလပ်ရက်ဖြစ်ပြီးခရစ်စမတ်၏အရေးပါမှုနှင့်စောင့်ကြည့်မှုသာလွန်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်များစွာသောတန်ဖိုးထားခြင်းကိုဘယ်တော့မျှမရရှိခဲ့ကြဘဲသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခြင်း၊
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိသကဲ့သို့, ကကျင်းပဖြစ်ပါတယ် မေလ၏ဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့။ တကယ်တော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားဟာအိမ်နီးချင်းတောင်ပိုင်းကနေလာတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကအဲဒီအချိန်ကသမ္မတ Woodrow Wilson ရဲ့အစပြုမှုကြောင့် ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တယ်။
သို့သော်၎င်းသည်အားလပ်ရက်မဟုတ်ပါ။ မြို့ရွာအားလုံးတွင်စျေးဆိုင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များသို့မဟုတ်ပန်းအလှပြင်သူများကဲ့သို့သောသူတို့အတွက်များစွာသောသူတို့အတွက်၎င်းသည်ဖောက်သည်များနှင့်အမှာစာများစွာကိုတက်ရောက်ရန်အရေးကြီးသောနေ့ဖြစ်သည်။ မိသားစုများစွာသည်မိခင်များကိုအိမ်နှင့်ဝေးသောနေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာဖြင့်ဖျော်ဖြေရန်ဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့်ဤသည်စားသောက်ဆိုင်များအတွက်ထူးခြားသည့်နေ့လည်းဖြစ်သည်။
3 ကွီဘက်၌: မိခင်များအတွက်နှင်းဆီပန်း
ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအားလုံးနီးပါး၌ဖြစ်သကဲ့သို့ကနေဒါတွင်လည်းမိခင်တစ် ဦး ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားသည်။ မိခင်များနေ့သည်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန်အထူးနေ့ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ "မိခင်များ" အကြောင်းပြောတဲ့အခါဒီအမျိုးအစားထဲမှာမိထွေး၊ ယောက္ခမနဲ့တခြားမိသားစုထဲကမိခင်တွေပါပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ် ယေဘုယျအားဖြင့်မိခင်အားလုံးအားချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအားလုံးအားတိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်.
ဒါ့အပြင်ကနေဒါ၌တည်၏ ဖခင်များနေ့ (အမြဲဇွန်လအတွက်တတိယတနင်္ဂနွေ) ။ သို့သော်ဤအားလပ်ရက်သည်မိခင်များနေ့ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဂုဏ်ပြုခြင်းများမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လည်းဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့၎င်းအခမ်းအနားသည်အခိုင်အမာကုန်သွယ်ရေးအခိုင်အမာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းကိုမီဒီယာများ၏ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။
ဒီကိစ္စကိုကြားနေရပေမယ့်ဒီနေ့ဒီထက်ပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးစားသုံးသူနည်းနည်းနဲ့ဒီနေ့ကိုကျင်းပချင်ကြတဲ့သားသမီးတော်တော်များများရှိပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အရေးကြီးသောသည်ဤသည်နေ့၏အဓိပ္ပာယ်သည်၎င်း၏အပြင်ဘက်ထုပ်မဟုတ်။
ကနေဒါနှင့်အခြားအနောက်နိုင်ငံများမှလက်ဆောင်များအကြားကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ အသုံးအများဆုံးများထဲတွင်ကျွန်တော်ဖော်ပြရပေမည် နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်များ, ကနေဒါတွင်တရားဝင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့်ရေးသားနိုင်သည်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် (ပျော်ရွှင်သောမိခင်များနေ့) နှင့်ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်Joyeuse fête des mères!) ။ သန်းချီသောဒီဇိုင်းများရှိသည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောဒီဇိုင်းများသည်မိခင်တိုင်းအတွက်တစ်ခုရှိသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ ကဒ်ကိုအအေးမခံစေရန်လူတိုင်းနီးပါးသည်ကိုယ်ပိုင်လက်ရေးစာအနည်းငယ်ထပ်တိုးသည်။
နောက်ထပ်ပုံမှန်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းအောင်မြင်သည်မှာရိုးရာချောကလက်သို့မဟုတ်ဘူးသီးတောင်ဖြစ်သည် ဆွစ်ချောကလက်။ ကနေဒါကချောကလက်ကိုနှစ်သက်တယ်။ နှင့်ကနေဒါမိခင်များ။ အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောကဏ္leavingမှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ၊ များစွာသောမိသားစုများသည်ကနေဒါရှိအမေများနေ့ကိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်စားခြင်း၊ အိမ်တွင်အရသာရှိသောခဲဖွယ်စားဖွယ်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကိတ်မုန့်တစ်ခုကိုလွဲချော်။ မရပါ။
သူတို့ကိုအများအားဖြင့်ပေးလေ့ရှိသည် အသေးစိတ်များနှင့်လက်ဆောင်များအမျိုးမျိုးအဝတ်အထည်နှင့်လက်ဆောင်ဘောက်ချာများမှစျေးအလွန်ကြီးသောလက်ဝတ်ရတနာများအထိ။ ၎င်းသည်မိခင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အရသာနှင့်ကလေး၏စီးပွားရေးဖြစ်နိုင်ချေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မိခင်ကိုပျော်ရွှင်စေရန်အနည်းငယ်မျှသာလုံလောက်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ကျောင်းတွေမှာ ကလေးများသည်မကြာခဏသူတို့၏မိခင်များအတွက်လက်မှုပညာများသို့မဟုတ်ပန်းချီကားများကိုပြုလုပ်ကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးလက်ဆောင်တွေအဖြစ်လက်ခံရရှိတယ်။
များသောအားဖြင့်လက်ဆောင်သည်ရိုးရိုးလေးလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည်ကြီးမားသောအကွာအဝေးများရှိသည့်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကလေးများသည်သူတို့၏မွေးရာပါအိမ်မှမိုင်ရာပေါင်းများစွာဝေးသောနေရာများသို့လေ့လာရန်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ရန်ပြောင်းရွှေ့ရန်မှာမထူးဆန်းပါ။ ဤဖြစ်ရပ်များတွင်ဤအထူးနေ့၌အိမ်သို့ပြန်လာခြင်းသည်တကယ့်ပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အ ပန်းပွင့် ၎င်းတို့သည်ကနေဒါနိုင်ငံ၊ အမေနေ့အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် ကွီဘက်ဒေသ။ လူတိုင်းသိသည့်အတိုင်းပြင်သစ်စကားပြောသောကနေဒါသည်အခြားတိုင်းပြည်များထက်ကွဲပြားသောအစဉ်အလာများနှင့်ဘဝပုံစံများကိုဂုဏ်ယူစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပြီးတော့ဒါတွေထဲကတစ်ခုပါ။
ကွီဘက်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ကြီးများတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်မိခင်များကိုနှင်းဆီပန်းများပေးလေ့ရှိသည်။ မေလဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း Montreal နှင့်အခြားမြို့များမှပန်းဆိုင်များသည်သြဂုတ်လတွင်ကုန်သည်။ ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး၊ ပန်းတွေအားလုံးပေးရမယ်။ ဒါပေမဲ့သင်ကဓလေ့ထုံးစံကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်မင်းပေးရမယ် နှင်းဆီပန်း၏ပန်းစည်း။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့အဲဒီမှာခေါ်သကဲ့သို့တစ် ဦး နှင်းဆီပန်း၏ပန်းစည်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကနေဒါမှအမေနေ့